Roobab ay ka dhasheen Khasaare oo ka da’ay gobolka Galgaduud – SBC
Roobab ay ka dhasheen Khasaare oo ka da’ay gobolka Galgaduud
Degmooyinka Caabudwaaq, Guriceel iyo Xarunta Gobolkaasi galgaduud ee Dhuusamareeb ayaa waxaa ka da’ay roobab Mahiigaan ah ii siweyn loogu diirsaday ayna si aad ah ugu baahi qabeen dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasi ka dib abaaro iyo biyo la’aan halkaasi ka jirtay.
Roobabka oo ahaa kuwo Aad u xoogan islamarkaana da’ayay in ka badan 24saac ayaa ay ka dhasheen khasaarooyin soo gaaray dadka iyo guryaha qaar ee magaalooyinkaasi, iyadoo ay wararku sheegayaan in ku dhowaad 14 qof ay ku dhaawacmeen roobabkaasi in ka badan 30 guriga ay ku burbureen .
Qaar ka mid ah dadka ku waxyeeloobay Roobabkaasi oo qaba dhaawacyo ayaa la hadlay xafiiska SBC ee Gobolkaas waxaana ay sheegeen in roobabku oo ahaa kuwo aad u xoogan islamarkaana wata dabeylo ay dhulka dhigeen guryo isugu jira dhagax iyo jiingadoba ayna sababtay dhaawaca badigiis dadka soo gaaray.
Sidoo kale Qeybaha kala duwan ee dhaq dhaqaaqa ganacsiga iyo gaadiidka ayaa hakad galay iyadoo aan maanta gelinkii hore jirin wax ganacsi ah oo ka soconayay magaalooyinka waaweyn ee ay roobabku sida aadka ah uga de’een sida Dhuusamareeb iyo Guriceel.
Roobabka guga ayaa ah kuwo siweyn looga dhursugayay, waxaana ay ka curteen dhamaan deegaanada gobolada Dalka iyagoona si wanaagsan oo alle looga mahadcelinayo u Da’ay.